Ungashajwa kanjani kabusha nge-DIGI mobile Easy and Fast - Shaja kabusha iselula
Ufuna ukushajwa kabusha iselula yakho ngokushesha nakalula futhi awazi ukuthi kanjani. Nge-DIGI mobil ungahlala uxhumekile. Lapha sethula wena isinyathelo ngesinyathelo sesi-3 izindlela ezilula kakhulu zokukwenza, khetha evumelana nezidingo zakho.
Ungakwazi ukushajwa kabusha ngokuthi: GO recharge, phinda ushaje ku-inthanethi kanye nasemaphoyiseni ashajwa kabusha (amaphoyinti okuthengisa, ama-ATM, iziteshi zesevisi, amahhovisi eposi, amadokodo ezingcingo ezitolo ezinkulu, njll).
Shaja kabusha i-GO!
Ngale ndlela ungaba nebhalansi kumakhalekhukhwini wakho ngaphandle kokusebenzisa i-inthanethi. Ngaphezu kwalokho, awunazo izindleko ezengeziwe zokusebenzisa isevisi. Ngalolu hlelo unezindlela ezi-2 zokushajwa kabusha ngeselula ye-DIGI:
1.- Ukudayela * 100 #
• Dayela * 100 # kusuka kuselula yakho bese ukhetha inketho 3 Shaja kabusha GO
• Khetha inani ofuna ukulishajwa kabusha
2.- Ukudayela u-1215
• Dayela u-1215 kuselula yakho bese ukhetha izinketho 3 no-1 (ukuphathwa kwebhalansi / ukushajwa kabusha kwe-GO)
Ukushajwa kabusha ku-inthanethi kuwuhlelo olusheshayo noluvikelekile. Ungasebenzisa iselula ye-DIGI kumadivayisi akho ngokufinyelela i-inthanethi. Ukufinyelela i-akhawunti yakho ye-DIGI noma ngaphandle kokuyifinyelela, faka nje inombolo yocingo ukuze uyishaje. Ukuze wenze lokhu ungasebenzisa i-Tablet yakho, ikhompuyutha noma idivayisi ephathwayo.
Finyelela ku-akhawunti yakho ye-DIGI
Uma i-akhawunti yakho isidaliwe, yifinyelele ngokufaka inombolo yakho yocingo kanye nekhodi yokufinyelela.
Ekugcineni, faka inani ofuna ukulishajwa kabusha kanye nemininingwane yekhadi lakho lasebhange. Kusuka lapha ungaphatha izinsiza zakho zeselula ze-DIGI kalula kakhulu.
Ngaphandle kokufinyelela i-akhawunti yakho ye-DIGI
Ngale nketho, Ungaphinda ushaje ngaphandle kokufinyelela i-akhawunti yakho yeselula ye-DIGI, vele ufake inombolo ofuna ukuyishaja futhi ngemva kokuhlola inombolo yakho, faka i-imeyili yakho, igama, inani ongalikhokhisa kanye nemininingwane ye-akhawunti yakho yasebhange (idebhithi noma ikhadi lesikweletu).
I-DIGI mobile inamaphuzu amaningi wokushaja, atholakala ezindaweni ezahlukene. Kufanele kuphela Ukucinga eseduze nendawo yakho. Izindawo lapho ungashaje khona kabusha iselula yakho yilezi:
• Ama-ATM e-La Caixa, sethula ikhadi lakho lasebhange futhi sifinyelela "ukushajwa kabusha kweselula"
• Iziteshi zeRepsol, Campsa, Petronor kanye ne-Cepsa.
• Izitolo zikagwayi kanye nezitolo zezindaba
• Ezimakethe ezinkulu nezitolo ezinkulu, njengalezi: Hipercor kanye neSupercor. Workcenter, Bodybell kanye nezitolo zeJuteco
• Amadokodo ocingo akhetha inketho "Isevisi Yokuphezulu Kweselula"
• Isondela kunoma iyiphi indawo yokuthengisa ye-RCS & RDS e-Romania
Phezulu kuselula » Izinkampani » Ungashajwa kanjani kabusha nge-DIGI mobil
Amazwana ama-2 kokuthi "Ungashajwa kanjani kabusha ngeselula ye-DIGI"
Pingback: ? Kugqekezwe i-Instagram: Ngenzenjani ukuze ngiyibuyisele?
Novemba 20, 2019 ngo-4: 16 pm
Kusuka kukhompuyutha, iselula noma ithebhulethi, njenganoma yikuphi ukuthenga ku-inthanethi, udinga kuphela ukufinyelela kwe-inthanethi ukuze ushaje kabusha i-DIGI SIM yakho.